Petrus Romanus, 6 Ogosto 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 6 Augustus 2021
Petrus Romanus, 6 Augusti 2021 →
Petrus Romanus, 6 Ogosto 2021
XAASKAYGA: “Iyada oo taajkan lagu mideeyay, waxaan nahay Mid ka mid ah Ciise Masiix, oo ka shaqeynaya badbaadinta dunida, maadaama ay hadda ku jirto khatar weyn.”
WILLIAM: Marwadayada ayaa hoos u foorarsatay oo dhunkatay dhafoorkayga waxayna samaysay Calaamadda Iskutallaabta: + Marwadayada waxay ku laabanaysaa Ciise agtiisa:
RABIGEENA IYO MARWADEENA: “Waxaan kugu ducaynaynaa wiilka ugu sarreeya oo ah xaaska dahsoon ee Maryan: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
RABIGEENA: “Maanta waa Dhalashada Hooyadayda ugu Quduuska ah – in kasta oo lagu xuso Kalandarka Kaniisadda bisha soo socota – laakiin maalin uun ayaa loo aqoonsan doonaa sidaas.”
“Wiilkaygii Quduuska ahaa, waddadu way adag tahay waqtigan, maxaa yeelay aadanaha ayaa weli ku jira mugdi weyn, xitaa ka dib markii carruurtaydu ay weli ku silcayaan harqoodka Faafa . Carruurtayda, Carruurtayda, iyagoo ku socda indhihiinna iyo dhegihiinnuba xiran yihiin dalabkeenna ah inaan indhahaaga u jeedinno waxyaalaha Jannada, oo aan dhammaanaynin. ”
“Iimaan -darrada darteed, Faafa ka xun ayaa ku dhici doona aadanaha, kaas oo argagax gelin doona aadanaha, maxaa yeelay wuxuu ku dhufan doonaa sambabbada iyo wadnaha. Waxaan u oggolaaneynaa Virus -ka dilaaga ah inuu u yimaado aadanaha, si uu noogu soo celiyo, kuwaas oo sugaya toobadkooda. Carruurteennu waa inay fahmaan inuusan ahayn Eebbe kan u oggolaaday xumaantaas, laakiin uu ku yimid rabitaanka xorta ah ee aadanaha. ”
“Markaad ku laabato gurigaaga Virusku wuxuu ka hirgali doonaa Australia iyo adduunka. Xaqiiji, wiilka qaaliga ah, kuma saameyn doonto, maxaa yeelay waa doonistayada in bini -aadamku ogaadaan inay tahay inay marka hore Ilaah u noqdaan oo ay dambi dhaaf weydiistaan ​​dambiyadooda oo dhan, markaas ayaan u diri doonaa dawada. Si dhaqso ah ayaad guriga u joogi doontaa, wiilkaygiiyow. Waa markaa, toddoba (7) bilood gudahood, Australia waa la ciqaabi doonaa. ”
“Adduunku wuxuu sii wadaa inuu iska indho tiro, in kasta oo aan sii wadno inaan u dirno Erayadayada Quduuska ah si aan u xoojinno, laakiin Tilmaamahayaga Quduuska ah ayaa weli la iska indhatirayaa.”
“Adduunku wuxuu sii wadaa inuu raaco dhiirrigelinta ka timid Shaydaanka, kaasoo dadka dul saaray ujeeddooyinkiisa sharka ah.”
“Adduunku wuxuu ku sii jiri doonaa mugdiga ilaa ay ka ogaadaan, in sababta ay aad ugu dhibeen, ay tahay inaysan mar dambe rumaysan Jiritaanka Ilaah.”
“Indhaha cirka ku hay , carruurtaydii macaanayd, maxaa yeelay goor dhow waxaad arki doontaa shay weyn oo ku soo socda. Cabsi iyo cidhiidhi ayaa qalbiyadiinna soo geli doona, markaasaad ii qayshan doontaan caawimaad. ”
“Badaha ayaa kor u kici doona oo daadin doona, Magaalooyin iyo Magaalooyin Xeebeedyo badan – sida duufaanadii ka kacay Jarmalka iyo waddamada deriska ah. Waxa aad hadda arkaysaa waa bilowgii uun. Waxaa iman doona waqti ay dhammaan foolkaanooyinku ka qarxi doonaan daruuro dambas wax burburinaya Carruurteenna iimaanka waayey. ”
“Carruurtayda, sababta oo ah masiibada ayaa sababaysa xidhitaanka samafalkaaga – marna ma ahayn inay sidaas noqoto. Waxaa sabab u ah cadowga, Illuminati – oo ah hormuudka yar ee aadanaha – wuxuu keenaa cabsida Faafida . Laakiin waxaad u baahan tahay inaad dhegeysato oo aad wax ka akhrido Dhakhaatiirta runta ah ee adduunka, kuwaas oo sheegay in Virus -ku uusan u xumaan sidii la rabay. Xiritaanka qof walba ma aha dariiqa, ama xirashada maaskaro, maxaa yeelay waxaas oo dhan waxay sameynayaan waa jabinta dhaqaalaha, oo ah qorshaha kuwa ugu sarreeya adduunka. Ururka Qarsoodigu wuxuu gacanta ku hayaa adduunka hadda wuxuuna adduunka joojin doonaa. Markay sidaas sameeyaan waxay tirin doonaan inta qof ee ay awoodaan. ”
“Carruurtayda, aad ugu duceeya in Fayrasyadu tagaan – una duceeya badbaadintaada. Ha ka baqin aniga oo adduunka maamula, in kasta oo aadanuhu i maqli waayo, waxay doortaan inay raacaan jinniyada. ”
“Ka geesku wuxuu samaynayaa dhaqdhaqaaqiisa, laakiin ma noqon doono mid dadweyne ilaa Digniinta Weyn ay dhacdo. Haddaba xaggayga u soo jeesta, carruurtaydii aan jeclahayow, waayo, wax aydaan ka baqayn ma jiraan. ”
U soo ducee Australia , maxaa yeelay carruurtaydu waa inay igu soo noqdaan. Dhawaan, Francis – oo jooga Rome – wuxuu samayn doonaa Baaq Dadweyne, kaas oo kala qaybin doona Kaniisadda. Aabbaha Quduuska ah, Benedict , ayaa dhawaan ka tagi doona Rome dhacdooyinkuna waxay dunida u keeni doonaan Digniintii Weynayd. ”
“U soo duceeya, carruurta qaaliga ah, Yurub , maxaa yeelay dhacdooyin waaweyn ayaa u imaan doona, kuwaas oo wax ka beddeli doona dariiqa adduunka. U soo ducee Mareykanka Ameerika , maxaa yeelay waxay geli doontaa dhibaato weyn. U soo ducee Ruushka , maxaa yeelay waxay sameyn doontaa tallaabo ay ku jebineyso waddanka Ukraine . U soo ducee Shiinaha , maaddaama ay waddo qorshayaal ay ku doonayso inay ku qaaddo Taiwan oo ay awood xooggan ku yeelato Hong Kong . U soo ducee Indonesia , maxaa yeelay dhulkeedu waa gariiri doonaa oo dad badan ayaa dhiman doona. ”
“Carruurtayda, kuma imaado war wanaagsan, laakiin waxaad u baahan tahay oo keliya inaad beddesho, markaas waxaad arki doontaa Barakooyin badan oo kuu imanaya.”
“Maanta, Caruurtayda, waa Dhalashada Hooyaday Barakaysan . U soo duceeya in Guulkeedu si dhakhso ah u yimaado. “
WILLIAM: Waxaan arkaa Saint Michael oo soo socda Marwadayada. Hooyadeena Quduuska ah hore ayay u socotaa – Aad bay u qurux badan tahay. Marwadayada ayaa i salaamaysa:
MARWADEENA: “Waxaan rabaa inaan la hadlo Carruurteena jecel. Waan ku salaamayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
“Carruurtayda aan jeclahay, maanta waa maalin barakaysan maxaa yeelay waxaan u dabaaldegnaa dhalashadayda maalintan. Waxaan u dirayaa mid kasta oo ka mid ah Carruurtayda Hadiyad gaar ah – Malaa’ig Askari oo ka socota Hogaanka Saint Michael . Malaa’ig kastaa waxay leedahay Hadiyad gaar ah oo xagga Eebbe ka timid oo ah inuu dhammaantiin idin siiyo oo Malag kasta waxaa la siin doonaa kaalin uu ku ciyaaro si uu u hago naf kasta oo loo dhiibay mas’uuliyadda, si uu ugu diyaariyo mustaqbalkooda. Saint Megulouris waa Malaa’igtaada, Ilmahayga – waad fahmi doontaa goor dambe sababta. “
“Adduunku wuxuu galay mugdi intaa ka sii badan, Carruurtaydii waana waqtigii dunida loo beddeli lahaa meel lagu caabudi doono Ilaaha Aabbaha ah iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Caruurta u duceeya, in Maalinta Iiddayda lagu dhawaaqo-tii Mediatrix, Co-Redemptrix iyo Advocacy- si nabaddu mar uun dunida ugu noqoto. U soo duceeya Ingiriiska , maxaa yeelay ciqaab baaxad weyn ayaa soo socota. ”
U soo ducee Bariga Dhexe , maxaa yeelay masiibadu kama horjoogsan doonto Ummadaha inay u soo bandhigaan Xasuuqii Holocaust .
“Waan idin jeclahay, carruur macaan oo waan idiin duceeyey: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. Xoog yeelo, maxaa yeelay inkasta oo iskutallaabtu ay noqon doonto mid sii cuslaata, ogow in wakhtiga soo noqoshada Ciise ee aadanaha, ay ka hadhay dhawr sano oo kale. Barya, tukada, Carruurtayda. Waan kula joogi doonaa ilaa dhammaadka Waxaan kuugu duceynayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
“Wiilkayga aan jeclahay ee Qalbigayga, hubso inaan kula joogo oo aan farriimo kuu soo diri doono ilaa aan kuu nimaadno inaan ku keeno [kuu] Meesha Saddexaad ee Jannada, halkaas oo lagugu beddeli doono lagana faray inaad dunida ku noqoto. , si uu u hago oo u hoggaamiyo dunida ilaa Wiilkayga Ilaahay, Ciise, soo noqdo. Waxaad yeelan doontaa waxyaalo badan oo aad samayso markaad gurigaaga timaadid, mar dhow. Nabad ku jooga. Waan ku jeclahay, Dhagaxii qaaliga ahaa ee badbaadadayda, Vicarkeygii Quduuska ahaa ee ugu dambeeyay: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
WILLIAM: Ciise iyo Maryanba way na duceeyaan +:
RABIGEENA IYO MARWADEENA: “Ilaa waqtiga xiga. Waan ku Jeclahay. ”
WILLIAM: Ciise iyo Maryan labaduba waxay sameeyaan Calaamadda Iskutallaabta:
RABIGEENA IYO MARWADEENA: “Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
WILLIAM: Malaa’igta ayaa weli heesaysa. +